Qaababka loo qoro cuntada karinta ee Word | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 30/04/2022 09:24 | dhowr
Haddii aad jeceshahay cunto karinta, hubaal ugu danbeyn waxaad ku dhammaynaysaa inaad qorto dhammaan cuntooyinkaas iyo noocyada kala duwan ee aad isku daydo oo kuu shaqeeya buug xusuus-qor ah. Laakiin ku dhawaad ​​qofna gacan dambe wax kuma qori karo, laakiin wuxuu isticmaalaa kombuyuutar. Si tan loo sameeyo, waxay abuuraan dukumeenti si ay u qoraan, laakiin ka waran haddii waxaanu kaa caawinaynaa habab aad ku qorto cunto karinta Word?
Sidaada oo kale, waxaanu nahay cunto kariye, inkasta oo aanu jecelnahay in aanu wax ku qorno gacanta, in lagu kaydiyo kombuyuutar aanu ognahay in aanu lumin doonin iyo in, weliba, ay muddo dheer socon doonto, waa dhiirigelin aad ku kharash garayso. . Haddaba, ka waran inaad nala tijaabiso jaantusyadaas?
1 Waa maxay sababta loo isticmaalo hab-qorista hab-qoritaan ee Word
2 Waa maxay walxaha uu leeyahay qaabka cunto karinta?
3 Qaababka loo qoro cunto karinta ee Word
3.1 Qaabka bilaashka ah ee lagu qoro laguna daabaco cuntooyinka
3.2 Curiyayaasha Envato
3.3 Qaabka Buugga Cunto karinta ee Word
3.4 Cunto fudud oo Word ah
3.5 Recipe qaab qaabaysan oo faahfaahsan
Waa maxay sababta loo isticmaalo hab-qorista hab-qoritaan ee Word
Bal qiyaas waxa soo socda. Waxaad haysataa cuntooyin isku dhafan oo had iyo jeer, fayl kasta, waa inaad ku dhejisaa haddii cunto karinta, haddii maaddooyinka, haddii tillaabooyin ... Sax? waxaad ku danbeyn lahayd inaad ku caajisto inaad had iyo jeer wax qorto. Intaa waxaa dheer, waxay ku soo bixi doonaan warqad madhan. iyada oo aan wax "chicha" ama qurxiyo. Waxaan ula jeedaa, caajis. Oo haddii aad rabto inaad sawirto sida ay u soo baxdo? Maxaa dhacaya haddii aad u baahan tahay inaad sheegto xeeladaha? Dhammaan ma bannaan yihiin?
Qaababka lagu qoro cunto karinta ee Word waa mid aad u fudud in la sameeyo, laakiin haddii aadan rabin inaad waqti ku bixiso abuurista mid oo aad rabto inaad isticmaasho, waxaan kuu sheegi doonnaa inay faa'iido badan u leedahay kuwan soo socda:
Waxaad yeelan doontaa walxaha lagu soo celiyo dhammaan cuntooyinka gacanta. Taasi waa, maaddooyinka, tallaabooyinka, xitaa meel bannaan oo lagu dhejiyo sawirada.
Dhammaan cuntooyinka ayaa isku mid noqon doona, kaas oo kaa caawin kara in aad qaabeeyaan ama ka dhigi karaan kuwo qurux badan maadaama ay dhammaantood isku mid ahaan doonaan. Intaa waxaa dheer, waxaad xitaa yeelan kartaa qaabab kala duwan iyadoo ku xiran haddii ay tahay cunto-cunto, koorsada koowaad, koorsada ugu weyn ama macmacaanka. Oo isha qaawan ayaad ku kala saari lahayd dhamaantood.
Waqti ayaad badbaadin doontaa, maadaama aad haysato template diyaar u ah inaad ku qorto, adigoon ka soo saarin xoqin.
Waa maxay walxaha uu leeyahay qaabka cunto karinta?
Haddii aad rabto in aad isku daydo oo aad adigu sameysid qaabka karinta karinta, sababtoo ah waa waxa laguu wakiishay naqshadeeye, ama sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad noqoto mid asal ah oo aad adigu sameysid, ogow in waxyaabaha muhiimka ah ay noqon doonaan:
Cinwaan, kaas oo kiiskan noqon doona magaca cuntada laftiisa.
Subtitle, haddii ay dhacdo in aad rabto in aad geliso cunto karinta uu yahay ama haddii ay tahay beddelka, waxay leedahay magac kale ...
Waxyaabaha ay ka kooban tahay, si aad u taxdo qaybo muhiim ah oo taxane ah si loo fuliyo.
Diyaarinta. Waxa kale oo aad samayn kartaa tillaabooyin haddii ay jiraan dhawr ay tahay inaad samayso. Tani waa meesha aad ka bixi doonto boos badan.
Finalmente, waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah waxyaabo kale oo badan sida wakhtiga diyaarinta, qoraalada haddii ay dhacdo inaad ku dhejiso khiyaamo ama shay si fiican kuu shaqeynaya, qalab, noocee cunto ah (haddii ay tahay macmacaan, koorsada koowaad, appetizer. ..)
Laakin, sida aanu nidhaahno, marka xigta waxaanu ku badbaadin doonaa wakhti badan.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad kaydiso qaar ka mid ah hab-qorista cunto karinta ee Word, ama si aad u tusto tusaaleyaal macaamiishaada, ama aad si shakhsi ah u isticmaasho, waxaanu halkan ku samaynay wax yar oo raadin ah si aan kuu badbaadino wakhti dheeraad ah. Kuwani waa kuwa aan helnay inta badan asalka ah.
Qaabka bilaashka ah ee lagu qoro laguna daabaco cuntooyinka
Nashqadan qaabaysan waxa uu ka yimi Cuntooyinka macaan oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso bilaash. Dhibaatadu waxay tahay inay ku siiyaan PDF laakiin waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho PDF to Word Converter si aad u nuqul ka sameyso qaabka oo aad u hesho waxaad u baahan tahay. Xataa hadhow waad taaban kartaa oo la qabsan kartaa sidaad jeceshahay.
Xaaladdan oo kale, ma aha laftiisa template ah, laakiin qaar badan. envatoelements Waa mid ka mid ah boggaga internetka oo ay ku jiraan qaabab badan (nooc kasta) waad heli doontaa naftaada.
Hadda, waxaad dhihi doontaa in la bixiyay, oo aad gabi ahaanba sax ah, laakiin sidoo kale waa in aad ogaato taas Waxay kuu ogolaanaysaa 7 maalmood oo tijaabo ah kaas oo aad kala soo bixi wax kasta oo aad rabto. Markaa waa inaad iska diwaangelisaa iimaylka oo aad ka raadisaa hab-qoritaan qoraal ah oo Word ah oo aad soo dejiso. In ka badan hal saac waxaa hubaal ah in aad heli doonto hub wanaagsan oo iyaga ka mid ah Waxa ugu fiicana waa in aanay wax kharash ah kugu bixin.
Qaabka Buugga Cunto karinta ee Word
Munaasabadan, iyo Xafiiska laftiisa, waxay na siisaa template si aan ugu soo dejino Word waxa uu noqon doono buug-cunto karinta. Halkan waxa uu ka sarreeyaa dhammaan sawirka saxanka, si aad u sameyso kuwa aad dhameyso.
Xaqiiqdii, waxaad yeelan doontaa dabool si aad u dhejiso "buugga cunto karinta" ka dibna qaab-dhismeedka aad ku dari karto magaca cuntada, wakhtiga iyo tirada dadka, walxaha, sawir, tillaabooyin sawir leh, iwm.
Iska hubi jaleecada oo maskaxda ku hay in aad ka timid Word aad hadhow wax uga beddeli karto sida aad jeceshahay.
Cunto fudud oo Word ah
Haddii aadan rabin inaad aad u dhibtoonaato, waxaad haysataa qaabkan cunto karintaIngiriisiga, haa. In waxa aad ka heli doontaa magaca cuntada sida cinwaanka, ka dibna tirada dadka, wakhtiga diyaarinta iyo wadarta wakhtiga.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo tillaabooyinka ayaa ku xiga, iyaga oo meel uga tagaya qoraallada.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa sawir halkan, inkastoo qaab-dhismeedka asalka ah uusan lahayn.
Weli, waa bilow wanaagsan si aad u awooddo soo degso oo tusaale u ah.
Recipe qaab qaabaysan oo faahfaahsan
Habkan Word waa a mid ka mid ah kuwa ugu faahfaahsan ee aan helnay sababtoo ah waxay ka kooban tahay 3 bog oo wax lagu qoro. Tusaaluhu wuxuu ku siinayaa likaha runtuna waa inay soo jiidato dareenka sababtoo ah halkan waxaad ku ballaarin kartaa bixinta faahfaahin weyn.
Xaashida kowaad waxaad yeelan doontaa nooc dabool ah, kaas oo oo leh sawir iyo cinwaano qaar aad bay u fiicnaan doontaa.
Ka dib, kan labaad waxa loo daayaa inta badan maaddooyinka iyo qoraallada qaarkood oo iyaga ku saabsan. Ugu dambeyntii, xaashida saddexaad tillaabooyinka diyaarinta cuntada ayaa lagu dhejin doonaa.
Xaqiiqdu waxay tahay in Word aysan jirin qaabab badan oo bilaash ah, markaa ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad ku sameyso khiyaanada Envato oo aad soo dejiso dhammaan kuwa aad jeceshahay ama aad ogtahay inay ku shaqeyn karaan. Habkaas waxaad ku heli kartaa habab loogu talagalay cunto karinta ee Word adigoon waqti ku bixin inaad adigu abuurto (ugu yaraan marka hore).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Qaababka loo qoro cunto karinta ee Word